Ufuna ngobuhlakani ezigubha leli holidi esibi kakhulu futhi impikiswano? Khona-ke kudingeka ukhethe umlingisi we-Halloween. kanjani uthanda lo Cheshire Cat? Yilokho uhlamvu ezithakazelisayo ngempela. Uhlakaniphile kakhulu, kodwa ngokuphelele crazy. Wayengumuntu inhlonipho, kodwa kancane baphikise. Phela, nguye cat kuphela emhlabeni, abangakwazi zinyamalale kolunye uhlangothi. Ukuze ophindukuzalwa kule geezer, kudingekile ukuze balukhulume kahle ukwakheka Cheshire Cat. A umqondo omuhle ukuba bathathe eholidini "Alice" noma okungenani "Hatter"!
Holiday iza kithi
Abantu abaningi abaqondi Halloween futhi zonke izindlela uzama ukuziqhelelanisa leli holide. Ngempela, kunanzuzoni kungaletha ku isiko osukwini lwethu lapho ungakwazi ukushintsha ibe umalugaju noma isidumbu ukuhamba, bese sizungeze izindlu, ukuqoqa candy?! Kodwa Russian Christmas Carols ngasizathu simbe, abaphikisi abanjalo-ke ungayididanisi! Ngakho ngempela akathandi iholide kungenxa kuphela ngomsuka walo Western? Kodwa-ke - a ukubandlulula yangempela!
Le iholidi akuyona American. Weza kusukela AmaCeltic! Futhi akusiwona ngosuku kaSathane, kodwa isikhathi kuphela uma ungakwazi smile, nibheke ubuso ukwesaba kwakhe. Uma ingane asaba ebumnyameni, ukuthi sdelyte suit Black ingubo noma Dracula. Ingabe ngeke wesabe lapho kuzohlala usuku lonke e indima umuntu wonke esaba? Cishe, uyobe uqonde ukuthi ukuba khona izinhlamvu ezifana - it is a fantasy!
nutcase Iningi ayinangozi
Uma namanje bagqoke up in isidumbu igazi-wafafaza akukho ukuzingela, ungazama ukwenza Cheshire Cat kusukela "ethi Alice in Wonderland". Lokho uhlamvu Yiqiniso, kuba nothile singenakwenzeka kuyangethusa, kodwa nakanjani edonsela!
Cheshire Cat - ngokungangabazeki sefilosofi, ezolile njalo futhi ethakazelisa kakhulu. Khumbula, inganekwane kwakubonakala umngane kuphela Alice, umngane wakhe othembekile, utshela nasezimweni ezinzima. Kulokhu, lo Cat Cheshire Kulula kakhulu ngakolunye abakhileyo Wonderland, kufanele siqaphela ukuthi wonke uyahlanya lapha.
Kufanele uma ukwenza Cheshire Cat? Noma kunjalo, ngale ndlela ngeke ukuphatha ukugwavuma elula, obekungadala anele indima zombie! Cheshire Cat ezingezwakali futhi emuhle, ngakho zama ukwenza kube uhlamvu elikhanyayo holidi!
Worth ukuhlola okungenani libala ethandwa kakhulu ngaphambi ukhetha nesithombe esisodwa nje. Manje ngokucacile ezihamba izindikimba vampire, nezithombe liphefumulelwe "Twilight" nesithi "Vampire Diaries", ngokuqinisekile captivate yiliphi iqembu. Ihlanganisa isithombe akunzima kangako: a bubuhle ukwakheka, a kwamazinyo ambalwa elingekho, futhi ukubona leyo bloodlust emehlweni akhe.
"Living Dead" akaphelelwa lokuhambisana. Lona ethandwa kakhulu, kodwa hhayi imvunulo ezithakazelisayo njalo. Kumele kukhunjulwe ukuthi Zombies musa ukulandela izingubo, kungaba ukuya ezipikili ikhanda noma nge-tortilla olunegazi esikhundleni amehlo. Komphakathi umsebenzi "zombies" zihlukile cha, ngakho abantu nobudlelwano lesi sithombe kungaqali ngempela kufanelekile.
Kodwa ukushintshashintsha on isihloko ikhathuni Zombies kuyoba ezithakazelisayo. Umkhuba wokulala cishe zonke nebalingisi Tim Burton - kusukela Edward Scissorhands ukuze Villi Vonka. Corpse Bride zidinga izimonyo eyinkimbinkimbi, futhi isikhumba okwesibhakabhaka, kodwa lesi sithombe ukushiya intombazane njengabesifazane kanye kuhle kakhulu! Kuyinto efanelekile futhi ukwakheka Cheshire Cat uma Ihlanganisa umfanekiso ifilimu Burton!
Izinketho isilwane imibala ethandwa kakhulu. On Halloween, cishe, uzagcwala amahlosi, panthers, amakati ngisho izimfene. Empeleni, lapha kungenzeka ukuba baphathe futhi wenze Cheshire Cat, nakuba kuye kwashiwo ukuthi akusiyo uhlamvu njengoba ngalokuvakalako.
"Le ndoda nge obubili" - isithombe le khulula nzima. Uma ungeyena izimonyo ubuhlakani, kungcono ukuthatha, noma ukuvala i-clown abavamile, ukuthi, by the way, eziningi kakhulu uvalo.
Kubonakala sengathi lesi sikhulu ngenhla, uma ufuna uyanda umkhuba, bese ukhethe ukwakheka kwe-Cheshire cat on Halloween. Akunjengesikhathi eziyinkimbinkimbi, kodwa ezithakazelisayo futhi ivumela ukuhlukahluka ngesihloko esithi ezihlongozwayo. Ungesabi ukuthi ikati lakho uthole imvume, ngoba iqembu akubalwa kusikisela ukuba khona eshaqisayo. Ngokwesibonelo, ngokuvamile ukwenza nge-Halloween umbala i Bambi isihamu noma unodoli Barbie.
Ngakho, Uzenza kanjani ukwenza Cheshire Cat? Thenga kakhulu upende patch amadevu. Khumbula ukuthi ukuze ujike ku unodoli ngesineke akudingekile. Lapho pick up izingubo ngokwanele ubhanqe imivimbo makeup. Ikati nhlobo othi awube kancane futhi amathoni efudumele ebusweni, ukuze othi awube - eceleni. Kodwa i-powder Akubukeki. Ikakhulukazi uma une freckles noma nezinduna. Ake uphawu nomlomo uhlanzekile. Ezidla ikati ukumamatheka - focus eyinhloko izimonyo, ngakho udinga uqalise nalo.
Thatha ipensela elula omnyama uphawu Smile besifunda indlebe endlebeni. Lines ethathelwe phansi futhi phezulu udebe. Ngokulandelayo, omunye nomunye nihamba imingcele ngesigqabo esimnyama. ingxenye engaphakathi ugcwalise ngopende omhlophe, kuhlanganise izindebe. Ikati kufanele njalo smile, kodwa ngenxa amakhona izindebe iyawakha, futhi, kudingeka umugqa. Ukuze raschertit amazinyo, ungasebenzisa ipeni lomsizi noma ngisho zehena, kodwa esimweni sesibili, ukwakheka Cheshire cat on Halloween Bayothwala empilweni abavamile!
Amabhonasi kanye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama
Khumbula ukuthi ukwakheka on Halloween "Cheshire Cat" igxathu negxathu ukwenza akuyona njengoba kunzima ukwenza uma uhlaka yasekuqaleni yesithombe. Cat - uhlamvu agqamile ngisho uyahlanya, ukuze lens anombala ikati kuyoba usizo olukhulu. Bavumele ezinemibala eluhlaza okwesibhakabhaka noma oluluhlaza. amehlo Yellow (noma inhlaka) ayisakwazi ukuya ikati, kodwa kubonakala Creepy ngempela. Ukuze amehlo aluhlaza, ungakwazi ukwengeza okufanayo umbala onqenqemeni kokuqeda kuthintwa ku amadevu akhe. Almond namehlo amise ukwenza, ngoba namanje ikati. By the way, umlingisi akudingeki kube guy. Ungenza Cheshire ikati - engeza curls futhi ngisho nangomcibisholo entanyeni!
Makeup Cheshire Cat ngezandla zakhe ukwenza elula, futhi lokhu asikho isidingo ukusebenzisa udayi eziyinkimbinkimbi. Enough ukugxila uhlobo isikhumba sakho siqu kanye nezinga ukujuluka. Noma kunjalo, iqembu kungaba eside futhi amapensela kungaba "ukubhukuda". Ukuze ugweme lokhu, kubalulekile ukuba powder nikulungele ukuze bahlanganise.
Phelelisa isithombe ikati zasendle manicure umbukwane, amakhrayoni izinwele kanye imihlobiso omkhulu sifana collar. Ungakhohlwa mayelana cilia phezulu, ngoba ikati amahle ngokwemvelo. Hairstyle kumelwe sicoceke noma ngokuphelele crazy. inketho Intermediate akukwazi, kusukela "sasendle" zenza-up kudinga Uhlaka okuhambisanayo.
Nezingubo emcimbini akufanele ukuba kuphazamise ukwakheka, ngoba edumile Cheshire ikati ezingaba ukuheha kuphela ukumamatheka futhi ikhuphuka ngaphandle komzimba wakhe. Ngakho ngubo kungaba amnyama futhi enesizotha, kodwa namanje hhayi girlish ngokuphelele nokuthi uyatetema. Isudi Kufanele noma amnyama jeans anemibala ne ijezi nezinala. imihlobiso Minimum - izesekeli okukhulu kuphela, egcizelela okushiwo ikati. Uma wayefisa, ungakwazi ukuthenga "esidladleni cat" nge ezihlalweni yokwelula languidly futhi purred at emehlweni ajwayelekile.